अत्याधिक सेक्सका कारण यो प्रजाती भइरहेछ गायब ! | Ratopati
अत्याधिक सेक्सका कारण यो प्रजाती भइरहेछ गायब !
अष्ट्रेलियामा पाइने मास्र्युपियल प्रजातीको जीवका दुई भालेको केही दिनअघि सेक्सपश्चात् मृत्यु भयो । अष्ट्रेलियाको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित रिपोर्टका अनुसार वैज्ञानिकले यसलाई अब लोपोन्मुख जीवको श्रेणीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । भविष्यका लागि यो प्रजातीको जीवलाई बचाएर राख्नुपर्ने वैज्ञानिकको उद्देश्य भएको बताइएको छ ।